fanontaniana Douglas A_20 Havoc
1 taona 2 volana lasa izay #809 by frederi350
Navoakako ny Havokavoka Douglas A_20 taorian'ny nisintonana ireo karazan-damba fiarovana amin'ny ordinatera (Norton sy User Account Control). Ny fampidinana sy ny fametrahana izay mahomby. Taorian'ny nandefasana FSX dia tsy nahita ny Havoc tao amin'ny Window Selection Window aho. Mampiasa FSX Booster 2013-Version 2.9 aho hanombohana FSX ary nanandrana nanomboka FSX ihany koa aho tsy nampiasa ny Booster 2013. Niezaka nanohy indray aho. Avy eo aho dia nanandrana nanavao ny FSX Flight Simulator Deluxe Edition avy amin'ny DVD Disk nampiasa ny endriky ny fisorohana. Manana FSX aho nakariko tao amin'ny d: data-drakitra tsy ny C: local disk ao amin'ny Programma Files (x86) / Microsoft Games. Niezaka nanamboatra imailaka imbetsaka aho tamin'ny fampiasana ny fametrahana automatique sy ny fametrahana Custom. Tsy misy zavatra tiako hampiakatra ny hazakazaka Douglas A_20 ao amin'ny Window Selection Window.
Processor: Intel (R) Core (TM) i7 4790K CPU @4.00 GHz
Feno fahatsiarovana (RAM): 16.0 GB (15.9 usable)
Adapter: NVIDIA GeForce GTX 970 sy Intel (R) Graphics 4600
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: papy68
Fotoana mamorona pejy: 0.197 segondra